''Pirojektiin misoomaa ummata miidhu kamiiyyuu fudhatama hin qabu'' - BBC News Afaan Oromoo
''Pirojektiin misoomaa ummata miidhu kamiiyyuu fudhatama hin qabu''
3 Caamsa 2018
Goodayyaa suuraa 'MIDROC' miidhaa warshaan Lagadambii jiraatotarraan geessise haale
Komii ummanni kubbaaniyyaa MIDROC irratti dhiyeeffate deebisuuf ejjannoo fi aangoon mootummaa naannoo oromiyaa hagami gaaffii jedhuuf, piroojektiin misoomaa ummata miidhu kamiiyyuu fudhatama hinqabaatu jedhera naannichi.
Kubbaaniyyaan MIDROC kan Godina Gujii laga dambiitti sookoo lommoxu ummata fayyaduun hafee miidhaa naannoo fi jireenya namaa akkasumas horiirraan ga'aa jira jechuun ummanni gaaffii gaafateen warshichi oomisha akka dhaabu mootummaa naannoo oromiyaa gaafatee ture.
Haa ta'u malee kubbaaniyyichi haroomsa eeyyama waggoota 10n dufanii argateera oduun jedhu erga dhagahameen booda ummanni naannichaa hiriira bauun mormiisaa dhageessiseera.
Nutis dhimma kanarratti ejjeennoon mootummaa naannoo oromiyaa maal, aangoonsaas hanga maaliitti jennee Hoogganaa Biiroo Dhimmoota Kommiyunikeeshinii Oromiyaa Dr. Negerii Leencoo gaafanneerra.
Akka Dr Nagariin jedhanittis kobbaaniyyaa MIDROC kan ilaalchisee ummanni komii bal'aa kaasaaa ture. ''Falammiin biyyoo, qilleensaafi bishaanii jira. Kunis kan mul'atu daa'immanni nannichatti yoo dhalatan qaamma hir'uun akka dhalatan. Dubartoota irra ulfi akka irraa bahu. Horiinsaanii illeen akka miidhamaa jiran. Walumaa galatti miidhaa garaa garaatiif saaxilaa jiran himataniiru,'' jedhu Dr Nagariin.
Haalli kun qoratamee haala saayinsaawaa ta'een furmaata atattamaa akka itti kennamu ture ummata waliin kan irratti walii galame ture kan jedhan Dr Nagariin, haa ta'u malee osoo kun eegamaa jiru eeyyamni haaromsanee jira oduun jedhu dhagahamu himu.
Kanaafuu, mootummaan Naannoo Oromiyaa adeemsi kun sirrii mitii fudhatama hinqabu kan jennuu jedhaniiru.
Miidhaa lubbuufi qabeenyaa naannoo irraa gahaa jiruun alattis warshichi ummataa naannichaatiif carraa hojiilleen umaa kan hinjirre ta'uun komiiwwan hawaasa naannichaatiin ka'an keessaa jedhaniiru.
Akkasumas laftiiwwan barbaacha warqeetiin walqabatanii qotaman deebiisanii misoomsuun balaa namootaafi loon irraa gahaa ture hambsuun ittigaafatamummaa warshichaa akka turees dhimmi biraa ummataan ka'aa tureedha.
Mootummaan Naannooo Oromiyaattis osoo karaa seeraa qabeessa ta'een itti hinbeeksiifamiin haarofamuun eeyyemichaa midiyaarraa dhagahamuu himu.
Haa ta'u malee ''pirojektiin misoomaa ummata miidhuu kamiyyuu fudhatama hinqabaatu. Sirachuu qabas. Kanarrattis mootummaa federaalaa waliin irratti hojanna jennee abdanna,'' jedhaniiru.
Wanti ummataan ka'aa jiruufi adeemsa kubbaaniyyaa kanaa ummattarraan miidhaa qaqabsiisaa turuunsaa qorannoon yoo mirkannaa'ee tarkaanfiin ittaanu maal ta'u danda'a jechuun gaaffii dhiyaateefis, ''Seera mootummaarra sirriitti kaa'amee akkuma jiruutti motummaan qabeenya naannoosaa ni bulchaa. Mootummaa naannoo kan hundeessee ammo federaalaa waan ta'eef, rakkoo umameef kan kanfalamuufi gara fuula duraatti rakkoon walfakkaatu akka hinmudanneef tarkaanniifiin fudhatamu qabu sirriitti beekamu qaba,'' jedhaniiru.
Yoo kana ta'uu baatee ammo garuu mootummaan naannoo Oromiyaa hineeyyamu jedhaniiru.
Sababiisaa yoo eeranis, motummaan qabeenyaafi ummata naannoosaa kunuunsuufi dhagahu qabaata. Komii ummataas dhagahuun barbaachisaadha sababii ummata malee mootummaan jiraachu hindandeenyeefu jedhaniiru Dr Nagariin.
Hayyamni warshaa warqii MIDROC haaromsamuunsaa komii kaaseera
''Yoo aadaan tan tee hin jirre, eenyummaan tan tee hin beekkamtu''
Eebbifamtoonni Yuunivarsiitii Jimmaa meeshaa ciniinsuu 'to'atu' kalaqan
Awwaalcha ganna 4,400n booda argame
Sa'uudiin 'jiddu-galtummaa' Ameerikaa balaaleffatte
Puutiin muuziqaa raappii 'to'achuu qabna' jedhan
Cireen soorata kaan caalaa qaamaaf barbaachisaa?
Kaambodiyaan ilkaan arbaa Afrikaa Kg3000 to'annoo jala olchite
Waliigalteen dhimma godaantotaa irratti mallattaa'e komii kaase